Mandehana amin'ny sambo mankany New York avy any Eropa | Vaovao momba ny dia
New York Usa | | mpitarika
Ny sambo fitsangantsanganana Queen Mary 2 rehefa tonga tany New York
Azonao an-tsaina ve ny hahatongavanao amin'ny sambo mankany New York? Mety hahagaga. Alao sary an-tsaina ny dia lavitra amin'ny sambo goavambe manerana ny Atlantika Avaratra. Toa romantika ve? Ny aloky ny Titanic dia mandrakotra an'io hevitra io ary ny mpandeha maro no mitady endrika fitsangatsanganana hafa izay tsy dia corset sy mangatsiaka loatra.
Aza diso, maika ary ny vola no manjaka amin'ny fanapaha-kevitra. Avy any Eropa ianao dia afaka mankany New York ao anatin'ny iray andro amin'ny tapakila izay matetika latsaka ny 500 euro. Ary amin'ny sambo? Afaka mivezivezy avy any Eropa mankany New York amin'ny sambo ve ianao? Mazava ho azy eny. Ary manana safidy roa isika: sambo fitsangantsanganana sy sambo mpivarotra.
Ny orinasan-tsambo Cunard Line Niampita ny Atlantika hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX izy io. Ho an'ny zotra izay mampifandray an'i Southampton sy New York dia manana ny transatlantic izy ireo Queen Mary 2, sambo fitsangantsanganana an-dranomasina naorina tamin'ny taona 2003 izay milaza fa izy no lehibe indrindra, lafo vidy ary lafo indrindra namboarina tamin'ny tantaran-dranomasina.
Araka ny azonao an-tsaina, tsy mora ny mandeha mitsangatsangana any New York. Ny vidiny dia eo anelanelan'ny 1.500 sy 10.000 Euros isaky ny mandeha, izay matetika eo anelanelan'ny valo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro. Mazava ho azy fa manana ny fampiononana rehetra azonao eritreretina izy.
Ho an'ireo izay tsy tia ny teny hoe fitsangantsanganana ary mihevitra ireo vidiny be loatra ireo dia azonao atao ny manandrana safidy somary atahorana: mandeha sambo mpivarotra. Orinasa maro orinasa maro no mamela ny mpandeha raha mbola mandoa vidiny voatondro izy ireo. Amin'ny maha mpandeha anao dia apetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ianao ary afaka miditra amin'ny ankamaroan'ny faritra ao anaty sambo.
Ny vidin'ireo sambo ireo dia ambany kely noho ny sambo fitsangantsanganana. Ny fivezivezena amin'ny mpandeha dia mety mitentina 60 ka hatramin'ny 90 euro isan'andro miaraka amin'ireo rehetra tafiditra ao.
Ny Internet dia feno pejy ary bilaogin'olona mitantara ny zavatra niainany tamin'ny sambo mpivarotra. Ho an'ireo mpandeha sahy kokoa, ary amin'ny vola voatahiry, dia mety ho safidy mahaliana kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Mandehana amin'ny sambo mankany New York avy any Eropa
Artic Resort Kakslautten, any Lapland any Suède